Laser fibre fanamarihana Machine FOL-10/20/30/50 - China Dongguan Glorystar Laser
Laser fibre fanamarihana Machine FOL-10/20/30/50
Product Features Voninahitra tamin'ny laser dia manangana sy mamokatra rivotra tanteraka hihena Fibre Optical Laser marika rafitra ao Shina. Tena sariaka ny tontolo iainana, ny fanjifàna ambany, tanteraka ho azy sy nitarika tamin'ny laser rafitra. Famoronana rafitra io tamin'ny laser mahatonga fiovam-po ny Optical tahan'ny niakatra ho any 38% -50%. Ny rivotra hihena dia afaka hihaona ny rafitra takiana. Io rafitra kely tamin'ny laser ary voalamina tsara ny habeny. Fibre Output, afaka mahatonga 3D flexibly rafitra fikarakarana. Ny mihemotra mampiseho isolator, izay mampiasa ny particularit ...
Voninahitra tamin'ny laser dia manangana sy mamokatra rivotra tanteraka hihena Fibre Optical Laser marika rafitra ao Shina. Tena sariaka ny tontolo iainana, ny fanjifàna ambany, tanteraka ho azy sy nitarika tamin'ny laser rafitra. Famoronana rafitra io tamin'ny laser mahatonga fiovam-po ny Optical tahan'ny niakatra ho any 38% -50%. Ny rivotra hihena dia afaka hihaona ny rafitra takiana. Io rafitra kely tamin'ny laser ary voalamina tsara ny habeny. Fibre Output, afaka mahatonga 3D flexibly rafitra fikarakarana. Ny mihemotra mampiseho isolator, izay mampiasa ny particularity ny halavan'ny onjam sy ny fitarihan 'tamin'ny laser, ary ny rafitra manokana ao anatin'ny mihemotra mampiseho isolator afaka hanakana ny tamin'ny laser hita taratra amin'ny asa kely mba tsy ny tamin'ny laser hiditra ny tamin'ny laser oscillator indray mba hanimba ny tamin'ny laser oscillator.
Translucent plastika bokotra, IC poti, Hafanàm-po an vokatra singa, fametrahana mazava tsara milina, firavaka, ny fahadiovana fantany, mirefy sady niteti fitaovana, watch solomaso, herinaratra fitaovana, Electronic Components, fitaovana Accessories, fitaovana fitaovana, finday fifandraisana singa, fiara faritra, plastika vokatra, fitsaboana fitaovana, fitaovam-panorenana, fantsona sy ny fametrahana mazava tsara vokatra avo-marika.
Ary metaly isan-karazany tsy metaly fitaovana, avo ny hamafin'ny alloys, oxides, voapetaka, coating, ABS, epoxy resin, ranomainty, plastika, sns
halavan'ny onjam 1064nm
andry kalitao M2 <1.5
Output fahefana 10% ~ 100% (hatrany mba ho zatra)
Output matetika 20KHz ~ 100KHz (hatrany mba ho zatra)
(8h) Power fahamarinan-toerana (8h) <± 1% RMS
Focus toerana savaivony <0.01 MG
mifanandrify habe 50X50mm 110mmX110mm 175mmX175mm
sary sokitra lalina 1.2mm
sary sokitra haingana Tarehin-tsoratra 800 Malagasy / faharoa
Minimum tsipika sakany 0.012mm
Minimum toetra 0.15mm
miverimberina araka ny marina ± 0.003mm
System asa WindowsXP / 2000/98
hihena fomba Air hihena
Mari-pana ny asa tontolo iainana 15 ℃ ~ 35 ℃
Power fitakiana 220V / mpitovo dingana / 50Hz / <400W
Life of tamin'ny laser Module 100000 hrs
Previous: 3D Dynamic Focus Series Laser fanamarihana Machine GLD-100 / GLD-200 / GLD-350
Manaraka: C02 Series Laser fanamarihana Machine CMT-10/30/60/100
Fibre Laser fanamarihana Machine
Laser fanamarihana Fa Metal
Metal Laser fanamarihana
C02 Series Laser fanamarihana Machine CMT-10/30/60/100
3D Dynamic Focus Series Laser fanamarihana Machine G ...
UV fametrahana mazava Laser fanamarihana Machine UV-3w / 5W / 7W / 10W
GLF-10 / 30C-dalana amin'ny fanamarihana Laser Pumped Machine